na 192-168-1-1 IP Address Info, inweta site http://192-168-1-1l.com, otu n'ime anyị isi na-ebute ụzọ bụ nzuzo nke anyị na ndị ọbịa. Nke a na iwu nzuzo akwụkwọ nwere ụdị ozi na-anakọtara na dere site 192-168-1-1 IP Address Info na otú anyị na-eji ya.
192-168-1-1 IP Address Info ndị a ọkọlọtọ usoro nke eji log faịlụ. A faịlụ abanye ọbịa mgbe ha na-eleta weebụsaịtị. All mba ụlọ ọrụ ime nke a na a akụkụ nke mba ọrụ’ nchịkọta. Ozi anakọtara site na log faịlụ na-agụnye internet protocol (IP) adreesị, ụdị ihe nchọgharị, Internet Service Provider (ISP), ụbọchị na oge stampụ, ezo / ụzọ ọpụpụ peeji nke, na ikekwe na ọnụ ọgụgụ nke clicks. Ndị a na-adịghị jikọrọ ozi ọ bụla na-idemesie amata. Nzube nke ozi bụ maka ịtụle ọnọdụ, anamde ibọ saịtị, nsuso ọrụ’ ije na website, ma na-ekpokọta ozi omume igwe mmadụ.
Ka ọ bụla ọzọ website, 192-168-1-1 IP Address Info-eji 'kuki'. Kuki ndị a na-eji iji chekwaa ihe ọmụma tinyere ọbịa’ preferences, na peeji nke na website na esenowo enweta ma ọ bụ gara. The na-eji ozi-ebuli ọrụ’ ahụmahụ site customizing anyị web page ọdịnaya dabeere na ọbịa’ ụdị ihe nchọgharị na / ma ọ bụ ozi ndị ọzọ.
Rụba nke ahụ ama 192-168-1-1 IP Address Info enweghị ohere ma ọ bụ na-achịkwa kuki ndị a na-eji-atọ ndị ọzọ-akpọsa ngwá ahịa.
Nke atọ pary Nzuzo Atumatu
Ị nwere ike ịhọrọ iji gbanyụọ kuki site na gị onye nchọgharị nhọrọ. Iji mara ihe ọmụma zuru ezu banyere kuki management na kpọmkwem ihe nchọgharị weebụ, ọ nwere ike na nchọgharị’ iche weebụsaịtị. Gịnị Bụ Kuki?
Akụkụ ọzọ nke anyị mkpa na-agbakwunye nchebe maka ụmụaka na-eji na-internet. Anyị na-agba nne na nna na ẹkekpemede na-edebe, isonye na, na / ma ọ bụ nyochaa ma na-eduzi ha online ọrụ.
192-168-1-1 IP Address Info anaghị akpachara anakọta ọ bụla Personal amata ozi site n'aka ụmụaka na-erubeghị afọ 13. Ọ bụrụ na ị na-eche na nwa gị nyere ụdị ozi a na anyị na website, anyị ike ka ị kpọtụrụ anyị ozugbo na anyị ga-eme anyị mgbalị kasị mma ngwa ngwa wepu ọmụma dị otú ahụ si anyị ndia.